जीवन/ दर्शन / शैली - Page 85 of 93 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page 85
असार २८ गते, २०७२ - १३:२२
महिलाले पुरुषलाई कहिले पनि नबताउने कुराहरु
२८ असार, काठमाडौं । महिलालाई बुझ्न मुश्किल मात्र होइन असम्भव नै छ भन्ने भनाई तपाईंमध्ये धेरैले सुन्नुभएको होला । तर यहाँ प्रश्न के छ भने, के महिलालाई बुझ्न साँच्चिकै त्यति मुश्किल छ ? उत्तर ‘छैन’ भन्ने पनि आउन सक्छ...
असार २५ गते, २०७२ - २०:३२
कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? अब यसो गर्नुहोस्
कपाल झर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर जब कपाल कोर्दा काइँयोमा अस्वाभाविकरुपले कपाल बेरिएर आउने गर्छ, तब समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कपाल झर्ने समस्या महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी देखिएको छ । कपाल झर्नाका...
असार २४ गते, २०७२ - १३:०३
महिलाले सेक्स गर्नुको पछाडि २ सय ३७ कारण
२४ असार, काठमाडौं । पुरुषजस्तै महिलाले पनि सेक्स गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण हुने गर्दछ । तर, महिलाहरुका लागि राम्रो सेक्स सम्बन्धको परिभाषा पुरुषहरुको अपेक्षाभन्दा केही भिन्न हुने गर्दछ । मनोवैज्ञानिक सिन्डी...
असार २३ गते, २०७२ - १५:५८
राष्ट्रपतिकी छोरी भन्छिन्, ‘हाँसो महान बरदान हो’
२३ असार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा निकै सक्रिय देखिने राष्ट्रपति रामवरण यादवकी पुत्री अनिता यादव सकारात्मक कुराहरु राख्न निकै रुचाउँछीन् । सकारात्मक सोच्न सुझाव दिन नछुटाउने उनले पछिल्लो समय हाँसोको...
असार २३ गते, २०७२ - १२:१२
अबको १० सेकेन्डमा आफ्नो भाग्य थाहा पाउनुहोस्
२३ असार, काठमाडाैं । आफ्नो भाग्यबारे उत्सुकता सबैलाई हुन्छ । तपाईं पनि अबको १० सेकेन्डमा आफ्नो मनमा आएको सबै प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले यतिमात्र गर्न आवश्यक छ – शान्त भएर आरामसँग बस्नुहोस् ...
असार २२ गते, २०७२ - १२:११
चाणक्य नीतिः सुन्दर महिलामा यी गुण भए नगर्नुहोस् विवाह
२२ असार, काठमाडौं । विवाहलाई जीवनको सबैभन्दा पवित्र बन्धन मानिन्छ, त्यसकारण हामीले यसमा हरेक प्रकारको सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । विवाहको लागि गरिने सानो गल्ती अथवा असावधानीले तपाईंलाई जीवनभरी समस्या दिने गर्दछ...
असार २१ गते, २०७२ - १७:४३
सावधान ! वर्षायाममा यस्ता रोग लाग्लान्, थाहा पाउनुस् लक्षण र बच्ने उपाय
२१ असार, काठमाडौं । पानी पर्ने मौसम आउने बित्तिकै वातावरण चिसो हुनुका साथै थुप्रै गम्भीर रोगहरुले पनि ढोका ढकढकाउने गर्दछ । वातावरणमा आद्रता बढेका कारण फंगस, भाइरस र ब्याक्टेरियाजस्ता थुप्रै प्रकारको रोगको खतरा...
असार २१ गते, २०७२ - १०:२७
केराका यी फाइदा थाहा पाएपछि सधैं खानुहुनेछ तपाईं
२१ असार । केरा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । दैनिक एक केरा खानाले तन– मन दुबै ताजा रहन्छ । केरा सुगर र फाइबरको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यसमा थाइमिन, नियासिन र फोलिक एसिडको रपमा भिटामिन ए र बी पर्याप्त मात्रामा...
असार १९ गते, २०७२ - १५:३१
सुत्ने तरिकाबाट थाहा पाऔं स्वभाव र यसले निम्त्याउने समस्याहरु
१९ असार, काठमाडौं । बेलायतको बडी ल्याङ्वेज विशेषज्ञ र स्लिप असेस्मेन्ट एण्ड एड्भाइजरी सर्भिसका निर्देशक र शोधकर्ता क्रिस इड्जिकोवस्कीका अनुसार व्यक्तिको सुत्ने तरिकाले स्वास्थ्य र समस्या दर्साउने गर्दछ । हामी...
असार १७ गते, २०७२ - १७:२३
क्यामरामा कैद भएका विवाहका सबैभन्दा मिठा पल
१७ असार । विवाह मानिसको जीवनको निकै सुन्दर क्षण हो । धेरै मानिसहरुको विवाह एउटा सपनाको रुपमा खडा भएको हुन्छ । आफ्नो सपना पूरा हुँदा कोही रुन्छन्, कोही हाँस्छन्, कोही केही प्रतिक्रिया नै दिदैनन् त कोही भने...